लकडाउनमा बढ्यो हिंसा - Pradesh Today
Homebreaking-newsलकडाउनमा बढ्यो हिंसा
दाङ, ५ जेठ । लकडाउनको समयमा महिला हिंसाका घटनाहरु बढी देखिएका छन् । कोरोनाभाइरसको महामारीको नियन्त्रणका लागि सुरु भएको लकडाउन अवधिमा यस प्रदेशमा झण्डै डेढ सय हिंसा भएका छन् ।
लकडाउन सुरु भएदेखि बैशाख मसान्तसम्म प्रदेश नं. ५ मा १ सय ३३ वटा महिला हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएका छन् ।
दुई महिनाको अवधिमा प्रदेश नं. ५ मा ४९ वटा घरेलु हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै दाङमा घरेलु हिंसाका घटनाहरु देखिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बताएको छ ।
जबरजस्ती करणी, घरेलु हिंसा, यौन हिंसा कुटपिट, यौन दुराचारका घटनाहरु बढी भएको प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार बैद्यवारले जानकारी दिए ।
घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी, लैंगीक हिंसा, सामाजिक हिंसा लगायतका हिंसाहरु देखिएका छन् । लकडाउन सुरु भएदेखि घरेलु हिंसा १५, जबरजस्ती करणी १,
जबरजस्ती करणी उद्योग १, यौन दुराचार १ र १ कर्तव्य ज्यानका मुद्दा दर्ता भएका छन् । बाँकेमा १० वटा घरेलु हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् ।
५ वटा जवरजस्ती करणी, १ वटा बालबिवाह, १ यौन दुराचार र १ वटा कर्तव्य ज्यान मुदा गरी जम्मा १८ वटा हिंसाका घटनाहरु प्रहरी समक्ष दर्ता भएका छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन हरेक व्यक्ति घरभित्रै बस्नुको विकल्प नहुँदा महिलामाथि हुने हिंसाजन्य गतिविधिहरु बढ्दो देखिएको बैद्यवारले बताए ।
कपिलवस्तुमा २६ वटा महिला हिंसामध्ये १३ वटा जबरजस्ती करणी, २ वटा जबरजस्ती करणी उद्योग, १ वटा यौन हिंसा, १ वटा कर्तव्य ज्यान र ९ वटा लैंगीक हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएको तथ्यांक छ ।
त्यसैगरी बर्दिया जिल्लामा पनि महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाजन्य गतिविधिहरु बढ्दै गएको पाइएको छ । प्रहरीमा दर्ता भएका २२ वटा घटनामध्ये सबैभन्दा धेरै लैंगीक हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएको प्रवक्ता बैद्यवारले बताए ।
उनले बर्दियामा १२ वटा लैंगीक हिंसाका घटनाहरु घटेको बताउँदै ४ वटा घरेलु हिंसा, १ वटा बहुविवाह, २ वटा जबरजस्ती करणी उद्योग र ३ वटा जबरजस्ती करणीका घटनाहरु दर्ता भएको जानकारी दिए ।
लकडाउन अवधिमा रुपन्देहीमा पनि महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । यस अवधिमा जबरजस्ती करणीका १० वटा, ४ वटा घरेलु हिंसा, ३ वटा यौन हिंसा गरी १७ वटा महिला तथा बालिकामाथि हिंसाका घटनाहरु दर्ता भएको प्रवक्ता बैद्यवारले बताए ।
नवलपरासीमा ३ वटा जबरजस्ती करणीका घटनाहरु प्रहरीसमक्ष दर्ता भएका छन् भने ८ वटा घरेलु हिंसा र १ वटा मानव बेचबिखन गरी १२ वटा हिंसाजन्य घटनाहरु दर्ता भएका छन् ।
रोल्पामा ४ वटा घरेलु हिंसा र २ वटा जबरजस्ती करणीका घटनाहरु दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै पाल्पामा जबरजस्ती करणी उद्योग शीर्षकमाथि १ वटा र घरेलु हिंसाका ४ वटा घटनाहरु दर्ता भएको पाइएको छ ।
रुकुममा पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी १ वटा र लैंगीक हिंसासम्बन्धी १ वटा घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी अर्घाखाँचीमा १ वटा जबरजस्ती करणी र १ वटा बहुविवाहका घटनाहरु भएका छन् ।
लकडाउनको समयमा हिंसा प्रभावित महिलाले आफूमाथि भएको हिंसालाई सहजरूपमा उजुरी गर्ने वातावरण नहुँदा सबै घटनाहरु प्रहरी तथा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्न नसकेको काउन्सिलर दिपा अधिकारीले बताइन् ।
विशेषगरी पारिवारिक अवस्था कमजोर भएका परिवारमा महिला हिंसाका घटनाहरु धेरै देखिएको उनी बताउँछिन् । स–साना कुराहरु लिने र सबै दोष महिलालाई दिई कुटपिट गर्ने गरेको उनले बताइन् ।
‘लकडाउनको समयमा घरभन्दा बाहिर निस्किने अवस्था छैन’, उनले भनिन्– ‘त्यसैले पनि महिलाहरु हिंसा सहन बाध्य छन् ।’
स्थानीय सरकारले हिंसापीडित महिलाहरुका लागि सुरक्षा आवासको व्यवस्था गर्न नसक्दा सबै हिंसाका घटनाहरु खुलेर बाहिर आउन नसकेको उनले बताईन् ।
यस समयमा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्नका लागि साधनको व्यवस्था नहुनु, न्याय दिने र लिने वातावरण उपलव्ध नहुनुजस्ता विविध कारणले पनि हिंसाका घटनाहरु बाहिर नआएको उनको भनाइ छ ।
यसका बढ्दो महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकार, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र न्यायीक समितिले हिंसा प्रभावितहरुका लागि सुरक्षा आवास, काउन्सेलर र हटलाइनको व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक रहेको उनको तर्क छ ।